ဗီဒီယိုကို YANDEX BROWSER ကိုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်: ဘယ်လို FIX မှ - YANDEX - 2019
ဗီဒီယိုကို Yandex Browser ကို braking နှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်း
တဦးတည်းအရေအတွက်က system ထဲကနေတယောက်ကိုဘာသာပြန်စာပေတစ်ဦးစနစ်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးသင်္ချာတွက်ချက်မှုနှင့်အခြေခံနားလည်မှုလိုအပ်သည်။ အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းများအတွက်လွှဲပြောင်းအော်တို mode မှာထွက်ယူသွားတတ်၏ရှိရာအထူးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများတီထွင်ခဲ့ကြသည်။
ဒဿမကနေ hexadecimal စနစ်ဘာသာပြန်စာပေနံပါတ်များ
အခုတော့ကွန်ယက်ဘာသာပြန်ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းဖို့အွန်လိုင်းမှဂဏန်းတွက်စက် posted ရာလုံလောက်သောန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေ့သူတို့ရဲ့အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုအာရုံစိုက်သောလူကြိုက်အများဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်။
Method ကို 1: သင်္ချာ Semestr
သင်္ချာ Semestr အပြည့်အဝ Russian သို့ဘာသာပြန်ထားသော။ ဒါဟာဘာသာပြန်ထားသောလိမ့်မည်သည့်စနစ်အားရွေးချယ်ဖို့စနစ်နှင့်၎င်း၏သင်္ကေတသတ်မှတ်, လိုချင်သောနံပါတ်ထည့်သွင်းရန်အသုံးပြုသူလိုအပ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့ကိုအပြင်ပုံစံအတွက်မှတ်ချက်တစ်ခုအရေအတွက်ကိုတွဲသည်သီအိုရီဒေတာများပါဝင်သည် * .doc.
ဤဝန်ဆောင်မှုများ၏အထူး features တွေ semicolon တစ်ခုနဲ့နံပါတ်များကိုရိုက်ထည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းများကို၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များပါဝင်သည်။
ယင်းသင်္ချာ Semestr site ကိုမှ Go
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "အွန်လိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်".
လယ်ပြင်၌ "နံပါတ်" သငျသညျဘာသာပြန်ဆိုချင်သူအရေအတွက်ရိုက်ထည့်ပါ။
ထိုဒေသတွင် "မှလွှဲပြောင်း" ရှေးခယျြ "10"အဆိုပါဒဿမစနစ်ကိုက်ညီဘယ်။
စာရင်းထဲက "ကိုယူခဲ့" ရှေးခယျြ "16".
ခလုတ်ကို Push "ဖြေရှင်း".
အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုအလိုအလျှောက်ဖြေရှင်းပြီးပါလိမ့်မည်, အသုံးပြုသူနောက်ဆုံးအရေအတွက်ကရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာနားလည်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအတိုသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်များအတွက်, ဒါကြောင့်ကြော်ငြာ-ပိတ်ဆို့ခြင်း software ကို disable လုပ်ဖို့နှစ်လိုဖွယ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
Method ကို 2: Planetcalc
တယောက်ကိုတယောက်အရေအတွက်က system ထဲကနေနံပါတ်လွှဲပြောင်းရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်ခွင့်ပြုတစ်ဦးကတော်တော်လေးလူကြိုက်များဝန်ဆောင်မှု။ အကျိုးကျေးဇူးများတစ်ဦးမျှမျှတတရိုးရှင်းပြီးဖော်ရွေ interface ကိုပါဝင်သည်။
သေတ္တာထဲတွင်လိုချင်သော number ကိုရိုက် "ကနဦး".
ရလဒ်များအတွက်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အရေအတွက်က system ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
ခလုတ်ကို Push "calculate ကို".
တခြားအလားတူန်ဆောင်မှုများနှင့်မတူဘဲအဖြေမရှိဖော်ပြချက်ဤအမှု၌အသုံးပြုသူကနောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းမှ လာ. အဘယ်အရပ်မှထွက်တွက်ဆဖို့အတော်လေးခက်ခဲပါလိမ့်မည်, ဒီတော့မသိဘဲလည်းမရှိ။
Method ကို 3: Matworld
"ဒီသင်္ချာ၏ကမ္ဘာ့ဖလား" - functional ဖြစ်စေအရင်းအမြစ်များနှင့်အွန်လိုင်း mode မှာသင်္ချာတွက်ချက်မှုအများစုခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပြင် site ကိုဒဿမနံပါတ်နှင့်တစ်ဦး hexadecimal number ကို system ကိုဘာသာပြန်ဆိုပေးနိုင်သည်။ Matworld တွင်တွက်ချက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှမျှတတအသေးစိတ်သီအိုရီသတင်းအချက်အလက်ကိုပေးအပ်သည်။ အဆိုပါစနစ်အဒဿမကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
့ dropdown list ကနေစတင်အရေအတွက်က system ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
စာနယ်ဇင်းများ "Translate"လယ်ပြင်၌ "ရလဒ်" သင်တို့သည်ငါတို့၏အရေအတွက်ကပုံပေါ်ချင်တယ်။
ကျနော်တို့ hexadecimal ဖို့ဒဿမအရေအတွက်ကိုစနစ်၏အပြောင်းအရွှေ့များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များပြန်လည်သုံးသပ်ပါပြီ။ အားလုံးန်ဆောင်မှုသူတို့ကိုနားလည်ရန်နိုင်အောင်လွယ်ကူသော, တူညီတဲ့မူအရအပေါ် operate ။